Maninona i Jodasy no namadika an'i Jesosy ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Nahoana i Jodasy no namadika an'i Jesosy
Ny antony namadihan'i Jodasy an'i Jesosy. Fantaro ny antony Namadika an'i Jesosy i Jodasy Iskariota asa sarotra io. Tokony hotadidintsika fa ao amin'ny Baiboly dia vitsy ny andalana miresaka momba an'io toetra io, ary ny vitsy ao dia milaza azy ho mpangalatra sy mpamadika. Na eo aza izany, Jesosy dia nifidy azy ho iray amin'ireo apôstôly roa ambin'ny folo fa hahazo fampianarana manokana manokana izy ireo, miaraka amin'ny tanjona ho lasa mpitarika ny fiangonana ho avy.
Na izany aza, misy teoria isan-karazany inona no afaka manome hazavana kely an'i Jodasy ary hahafantatra antsika naninona izy no namadika ny mpampianatra azy. Alohan'izany anefa dia tsy maintsy fantarintsika hoe iza i Jodasy ary inona no nataony.
1 Iza moa i Jodasy Iskariota
2 Ahoana no namadihan'i Jodasy an'i Jesosy
3 Ny antony namadihan'i Jodasy an'i Jesosy: teoria isan-karazany
3.1 1. Ny fahadisoam-panantenan'i Jodasy
3.2 2. Ny toetran'i Jodasy
3.3 3. Nahoana i Jodasy no namadika an'i Jesosy: Ny drafitra masina
Iza moa i Jodasy Iskariota
Ny hany zavatra fantatsika momba an'i Jodasy dia hita ao amin'ny Filazantsara. Misaotra azy ireo, fantatsika izany Zanakalahin'i Simona izy ary izany Izaho no niandraikitra ny volan'ny vondrona, fa nanana fahazarana mangalatra ampahany amin'ny fanangonana.
Mitombo ny lazany rehefa manakaiky ny andro farany amin'ny fiainan'ny Mesia isika, satria i Jodasy no nitondra ny manam-pahefana nankany amin'ny Tendrombohitra Oliva hisambotra an'i Jesosy.
Ahoana no namadihan'i Jodasy an'i Jesosy
Ny Evanjely dia nitantara fa ny mpitondra fivavahana jiosy dia nitady fomba hisamborana sy hamonoana an'i Jesosy, nefa tsy nahatezitra ny vahoaka. Noho izany, nandoa vola 30 an'i Jodasy izy ireo volafotsy hampiharihariana ny "mpanakorontana" amin'ny miaramila romana.
rehefa Jodasy tsapany ny nataony, nanenina mafy ary nitady ireo mpitondra fivavahana izy hamerina ny vola nomeny azy. Na izany aza, Efa tara loatra. JODASY nanatanteraka ny famadihana azy. Fotoana fohy taorian'izay namono tena izy.
Ny antony namadihan'i Jodasy an'i Jesosy: teoria isan-karazany
Ny Baiboly dia boky misy tantara marobe. Ny sasany amin'izy ireo dia mifandray ara-bakiteny ary ny sasany kosa mampiasa fiteny literatiora arakaraka ny fotoana. Noho io antony io dia misy tsy fitoviana amin'ny lafiny maro. Raha tsy mandeha lavitra dia misy izy ireo teoria isan-karazany hanazavana ny antony namadihan'i Jodasy an'i Jesosy. Na izany aza, izay marina indrindra dia mendrika ny hamakafaka daholo.
1. Ny fahadisoam-panantenan'i Jodasy
Ny iray amin'ireo teoria nahazo hery lehibe indrindra dia nifototra tamin'ilay zanakalahin'i Simon diso fanantenana tamin'i Jesosy izy. Azo inoana tokoa fa i Jodasy miandry ny Mpanjaka nambaran'ny Mesia, iza no hitarika hetsika politika fanafahana amin'ny alàlan'ny hetsika mahery setra atao amin'ireo manampahefana eo an-toerana. Na izany aza, ny hafatra pacifista mety tsy dia nalaza loatra.
2. Ny toetran'i Jodasy
Ny teoria hafa dia mifototra amin'ny toetran'i Jodasy. Araka ny efa voalaza etsy ambony, Mpandainga izy, tia tena, mpangalatra ary mpamadika. Noho izany, nSa hafahafa raha amidiny vola ny mpampianatra azy. Rehefa tsapany fa fantatr'i Jesosy ny fikasany, vao azony fa tian'i Jesosy mihoatra ny zava-drehetra izy. Teo izy rehefa nitarika azy hamono tena ny feon'ny fieritreretany.
3. Ny antony namadihan'i Jodasy an'i Jesosy: Ny drafitra masina
Misy teôria izay tsy an'ny evanjely canonika. Na izany aza, nahazo tombam-bidy betsaka izy tamin'ny fahitana filazantsara vaovao synoptika antsoina hoe ny Filazantsaran'i Jodasy.
Ity teoria vaovao ity dia milaza fa Jodasy dia toy ny miaramila izay nanatanteraka ny baikon'ny mpitondra azy ary izay, rehefa avy nanao ny famadihana, dia nasaina namono ny ainy. Noho izany, tsy mpamadika izy fa maritiora fa nahatanteraka ny drafitr'Andriamanitra izy.
Na inona na inona antony satria namadika an'i Jesosy i Jodasy, ny zava-dehibe amin'ity tantara ity dia ny fahalalana izany Fantatr'i Jesosy izany famadihana izany. Mampiseho antsika izany Tonga teto amin'ity tontolo ity Jesosy niaraka tamin'ny drafitra efa napetraka mialoha sy ny momba ny fitiavany infinito.
Ny olon-kafa rehetra dia tsy namela ny mpamadika handeha hiaraka aminy ary azo inoana fa hanameloka azy alohan'ny handaniany ny fivadihany. Na izany aza, Lehibe tokoa ny fitiavan'i Jesosy an'i Jodasy ka tsy nanakana azy tsy hanatanteraka ny anjarany izany.
Izany no izy! Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia manampy anao hahatakatra ny antony satria namadika an'i Jesosy i Jodasy. Raha izao dia te hahalala ianao nahoana i Jesosy no nanozona ny aviavy?, manohy mizaha Discover.online.
Ahoana ny fomba famakiana Baiboly hahalala azy